Faaqidaadda: Dhibaatada Dhalinta Qurbaha
Barnaamikeena Faaqidaadda Todobaadka waxaan ku eegaynaa dhibaatada dhalinyarada Qurbaha ee Somalida, gaar ahaa waxa ku kalifaya inay ka caraan waalidiintooda oo ay dib ugu laabtaan dagaallada ka socda gudaha Soomaaliya, oo markii horeba amaan daridda ka jirta awgood loo gala soo cararay.
Barnaamijka waxaa ka qeybgalaya;
-Sheekh Cabdiraxman Maxamed Cabdalla oo Britian ku sugan, oo ah aabaha mid ka mid ah laba dhalinyara ah oo cidamama Kenya ay qabteen bishii hore iyagoo ku sii jeeda Magaalada Kismayo si ay ugu biiraan kooxda Alshabaab.
-Cusman Axmed Sheekh oo ku sugan magaalada Minneaplis. isla markaana abti u ahaa mid ka mid ah dhalinyaradii Soomaali-Maraykanka ee ku biiray Al-shabab sannadki 2008-dii, oo markii dambana Muqdishido lagu dilay
-Dr Max'ed Aden Cali oo ah guddoomiyaha dhakhaatiirka Soomaalida ee Waqooyiga America oo ku sugan Minneapolis.
Waxaa kaloo ka qeybgalaya barnaamijka laba aqoonyahan oo ku sugan Magaalada London oo kala ah; Caasho-Kiin Faarax iyo C/Samad Cali Xaashi
Barnaamijka oo dhameystiran qeybta hoose ee qoraalkan ka dhageyso.